परमेश्वरले दिनुभएको छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको वरदान | अध्ययन
“जहाँ यहोवाको पवित्र शक्ति हुन्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ।”—२ कोरि. ३:१७.
गीत: ६२, ६५
यहोवाले हामी प्रत्येकलाई कस्तो वरदान दिनुभएको छ?
छनौट गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने तरिकाबाट हामी यहोवालाई कत्तिको प्रेम गर्छौं भनेर कसरी देखिन्छ?
हामी अरूको निर्णयलाई कसरी आदर गर्न सक्छौं?
१, २. (क) छनौट गर्ने स्वतन्त्रताबारे मानिसहरूको कस्तो फरक-फरक धारणा छ? (ख) छनौट गर्ने स्वतन्त्रताबारे बाइबल हामीलाई के बताउँछ? हामी कुन-कुन प्रश्नबारे छलफल गर्नेछौं?
एउटा निर्णय गर्नुपर्दा एउटी महिलाले आफ्नो साथीलाई यसो भनिन्‌: “मैले के गर्नुपर्छ भन, धेरै सोच्न नलगाऊ। त्यसो गऱ्यो भने मलाई सजिलो हुन्छ।” सृष्टिकर्ताले हामीलाई एउटा अनमोल वरदान दिनुभएको छ। त्यो हो, छनौट गर्ने स्वतन्त्रता। तर ती महिलाले यो वरदान प्रयोग गर्नुको साटो आफ्नो लागि अरूले निर्णय गरिदिएको चाहन्थी। तपाईं नि? के तपाईं आफ्नो निर्णय आफै गर्न चाहनुहुन्छ? वा आफ्नो लागि अरूले निर्णय गरिदिएको चाहनुहुन्छ? छनौट गर्ने स्वतन्त्रताबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ?
२ वर्षौंअघिदेखि मानिसहरूले यस विषयमा आ-आफ्नै धारणा राख्दै आएका छन्‌। कसै-कसैले छनौट गर्ने स्वतन्त्रता भन्ने कुरै छैन भन्छन्‌। तिनीहरूको विचारमा सबै कुरा भगवान्‌ले पहिल्यै निर्धारण गरिसकेको हुन्छ। कसै-कसैको विचारमा भने असीमित स्वतन्त्रता छ भने मात्र साँचो अर्थमा हामीसित छनौट गर्ने स्वतन्त्रता छ भन्न मिल्छ। तर यो विषय राम्ररी बुझ्न परमेश्वरको वचन बाइबल के भन्छ, त्यो थाह पाउनुपर्छ। किन? किनभने बाइबलमा बताइएअनुसार यहोवाले हामीलाई छनौट गर्ने स्वतन्त्रतासहित सृष्टि गर्नुभयो। यसको अर्थ हो, हामीसित आफैले सोचविचार गरेर निर्णय गर्ने क्षमता र स्वतन्त्रता छ। (यहोशू २४:१५ पढ्‌नुहोस्) बाइबलले यी प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिन्छ: छनौट गर्ने स्वतन्त्रतालाई हामीले कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ? के यसको कुनै सीमा छ? छनौट गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने तरिकाबाट हामी यहोवालाई कत्तिको प्रेम गर्छौं भनेर कसरी देखिन्छ? हामी कसरी अरूको निर्णयलाई आदर गरेको देखाउन सक्छौं?
यहोवा र येशूबाट हामी के सिक्न सक्छौं?
३. स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा यहोवाले कस्तो उदाहरण बसाल्नुभएको छ?
३ यहोवाको स्वतन्त्रताको कुनै सीमा छैन। उहाँले जुन तरिकामा आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो लागि राम्रो उदाहरण हो। जस्तै: उहाँले इस्राएल राष्ट्रलाई “आफ्नो निम्ति एक विशेष जाति” बनाउने छनौट गर्नुभयो। (व्यव. ७:६-८) तर यो छनौट उहाँले आफूखुसी गर्नुभएको थिएन। धेरै वर्षअघि आफ्नो मित्र अब्राहामसित प्रतिज्ञा गरेअनुसारै यहोवाले एउटा विशेष जाति छान्नुभएको थियो। (उत्प. २२:१५-१८) साथै यहोवा सधैं आफ्नो प्रेम र न्यायसित नबाझिने गरी स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नुहुन्छ। पटक-पटक साँचो उपासना त्याग्ने इस्राएलीहरूलाई यहोवाले अनुशासन दिनुभएको तरिकाबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ। तिनीहरूले मनैदेखि पश्‍चात्ताप गर्दा यहोवा तिनीहरूलाई प्रेम र दया देखाउन इच्छुक हुनुभयो। उहाँले यसो भन्नुभयो: “तिनीहरू मबाट तर्किगएकोमा म तिनीहरूलाई क्षमा गर्नेछु। म तिनीहरूलाई अपार प्रेम देखाउनेछु।” (होशे १४:४) अरूको हित हुने तरिकामा आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कस्तो राम्रो उदाहरण!
४, ५. (क) परमेश्वरबाट छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको वरदान पाउने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो? उहाँले त्यो कसरी प्रयोग गर्नुभयो? (क) हामी प्रत्येकले आफूलाई कुन प्रश्न सोध्नुपर्छ?
४ यहोवाले स्वर्गदूतहरू र मानिसहरूलाई छनौट गर्ने स्वतन्त्रता राखेर सृष्टि गर्नुभयो। यो वरदान पाउने पहिलो व्यक्ति उहाँको जेठो छोरा हुनुहुन्थ्यो, जो “अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप” हुनुहुन्छ। (कल. १:१५) पृथ्वीमा आउनुअघि नै येशूले आफ्नो बुबाप्रति वफादार रहने अनि सैतानको विद्रोहमा साथ नदिने छनौट गरिसक्नुभएको थियो। पछि पृथ्वीमा पनि उहाँले त्यो महाविरोधीका प्रलोभनहरू इन्कार गर्न आफ्नो छनौट गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नुभयो। (मत्ती ४:१०) आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा अघिल्लो रात येशूले परमेश्वरको इच्छाबमोजिम गर्ने आफ्नो सङ्‌कल्पलाई फेरि दोहोऱ्याउनुभयो। उहाँले यसो भन्नुभयो: “हे बुबा, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने यो कचौरा मेरो सामुन्नेबाट हटाइदिनुहोस्। तैपनि मेरो होइन तर तपाईंको इच्छाबमोजिम होस्।” (लूका २२:४२) येशूले जस्तै हामी पनि यहोवाको आदर गर्न र उहाँको इच्छाबमोजिम गर्न आफ्नो छनौट गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गरौं! के यसो गर्न सम्भव छ?
५ सम्भव छ किनभने हामी पनि परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका हौं। (उत्प. १:२६) तर हाम्रा सीमितताहरू छन्‌। यहोवासित मात्र असीमित स्वतन्त्रता छ। हाम्रो स्वतन्त्रताको सीमा छ अनि परमेश्वरले तोक्नुभएको सीमा हामीले पालन गर्नुपर्छ भनी परमेश्वरको वचन बताउँछ। जस्तै: पत्नीहरू पतिको अनि छोराछोरी आमाबाबुको अधीनमा बस्नुपर्छ। (एफि. ५:२२; ६:१) परमेश्वरले तोक्नुभएको सीमाभित्र रहेर हामी आफ्नो छनौट गर्ने स्वतन्त्रता कसरी प्रयोग गर्नेछौं? यस प्रश्नको जवाफमा हाम्रो अनन्त भविष्य मुछिएको छ।
छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको सही र गलत प्रयोग
६. हाम्रो स्वतन्त्रताको सीमा हुनु किन उचित हो, उदाहरण सहित बताउनुहोस्।
६ हाम्रो छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको सीमा छ। के यसलाई साँचो स्वतन्त्रता भन्न मिल्छ? अवश्य मिल्छ! हामी किन यसो भन्न सक्छौं? मानिसहरूको स्वतन्त्रतामा सीमा तोकिदिंदा त्यसले हाम्रै सुरक्षा हुन्छ। उदाहरणको लागि, हामीले कतै टाढा पर्ने सहरमा आफै गाडी हाँकेर जाने छनौट गऱ्यौं। तर यात्रा गर्न लागेको राजमार्गमा कुनै ट्राफिक नियम छैन भने के होला? कुन गतिमा गाडी हाँक्ने अनि बाटोको कुन छेउबाट गाडी हाँक्ने भनेर सबैले आफूखुसी निर्णय गर्छ भने त्यस्तो बाटोमा के हामी सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौं र? अहँ, कदापि सक्दैनौं! साँचो स्वतन्त्रताको सीमाभित्र रहेर निर्णय गऱ्यौं भने मात्र हाम्रो फाइदा हुन्छ। यहोवाले तोक्नुभएको सीमाभित्र रहेर आफ्नो छनौट गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हो भनेर बुझ्न बाइबलका केही उदाहरण विचार गरौं।
७. (क) छनौट गर्ने स्वतन्त्रताले गर्दा अदनमा भएका अरू जीवजन्तुभन्दा आदम कसरी फरक थिए? (ख) आदमले आफ्नो छनौट गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको एउटा उदाहरण बताउनुहोस्।
७ पहिलो मानव आदम सृष्टि गर्दा यहोवाले तिनलाई एउटा वरदान दिनुभयो। उहाँले त्यो वरदान स्वर्गमा बस्ने दूतहरूलाई पनि दिनुभएको थियो। त्यो हो, छनौट गर्ने स्वतन्त्रता। यस वरदानले गर्दा आदम अरू जीवजन्तुभन्दा फरक थिए। किनभने जीवजन्तुहरू सहज ज्ञानको भरमा हिंड्‌छन्‌। आदमले आफ्नो छनौट गर्ने स्वतन्त्रता सही तरिकामा प्रयोग गरेको एउटा उदाहरण विचार गरौं। मानिस सृष्टि गर्नुभन्दा पहिले जनावरहरू सृष्टि गरिए। तर ती जनावरहरूलाई नाम दिने रमाइलो काम भने यहोवाले पहिलो मानव छोराको लागि साँचेर राख्नुभएको थियो। “परमप्रभुले सबै वन-पशु र आकाशका सबै पक्षीलाई . . . मानिसले तिनीहरूको के के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनलाई मानिसकहाँ ल्याउनुभयो।” आदमले हरेक जनावरलाई राम्ररी नियालेपछि त्यसलाई सुहाउने नाम दिए। आदमले गरेको यस काममा यहोवाले हस्तक्षेप गरेर अर्कै नाम दिनुभएन। बरु “मानिसले हरेक प्राणीलाई जे जे नाउँ दिए त्यही त्यहीनै त्यसको नाउँ भयो।”—उत्प. २:१९.
८. आदमले छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको कसरी दुरुपयोग गरे? परिणाम कस्तो भयो?
८ परमेश्वरले आदमलाई त्यस सुन्दर बगैंचामा खेतीपाती गर्ने र त्यसको हेरचाह गर्ने काम दिनुभएको थियो। तर दुःखको कुरा, आदमलाई त्यतिमा मात्र चित्त बुझेन। परमेश्वरले तिनलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो: “फल्दै-फुल्दै, वृद्धि हुँदै, पृथ्वीमा भरिंदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। औ समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर।” (उत्प. १:२८) यो आज्ञा पूरा गर्न परमेश्वरले आदमलाई प्रशस्त स्वतन्त्रता दिनुभएको थियो। तैपनि तिनले परमेश्वरले तोक्नुभएको सीमा नाघे र उहाँले नखानू भन्नुभएको फल खाने छनौट गरे। आदमले आफ्नो स्वतन्त्रताको घोर दुरुपयोग गरेकोले तिनको सन्तानले दुःखकष्ट र पीडा भोग्नुपरेको हजारौं वर्ष भइसक्यो। (रोमी ५:१२) आदमले जुन तरिकामा आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरे, त्यसले दुःखद परिणाम निम्त्यायो। यो कुरा विचार गर्दा हामी सही तरिकामा अनि यहोवाले तोक्नुभएको सीमाभित्र रहेर त्यो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न कटिबद्ध हुन्छौं।
९. यहोवाले इस्राएल राष्ट्रलाई कस्तो छनौट गर्ने मौका दिनुभयो? तिनीहरूले के गरे?
९ आदम र हव्वा त्रुटिरहित थिए अनि तिनीहरू सधैंभरि बाँच्न सक्थे। तिनीहरूको अनाज्ञाकारिताले गर्दा तिनीहरूका सन्तानले त्रुटिरहित शरीर र सधैंभरि बाँच्ने जीवन गुमाए। तर छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको वरदान भने गुमाएनन्‌। यो कुरा परमेश्वरले इस्राएल राष्ट्रसित गर्नुभएको व्यवहारबाट प्रस्ट हुन्छ। यहोवाले मोशामार्फत इस्राएल राष्ट्रलाई उहाँको विशेष जाति हुने कि नहुने भनेर छनौट गर्ने मौका दिनुभयो। (प्रस्थ. १९:३-६) तिनीहरूले के गरे? परमेश्वरको नामको लागि एउटा विशेष जाति बन्न पूरा गर्नुपर्ने सबै सर्त स्विकार्ने निर्णय गरे। तिनीहरूले एकसाथ यसो भने: “परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुराहरू हामी पालन गर्नेछौं।” (प्रस्थ. १९:८) तर दुःखको कुरा, समय बित्दै जाँदा इस्राएल राष्ट्रले आफ्नो स्वतन्त्रताको गलत प्रयोग गऱ्यो र आफूले दिएको वचन पूरा गरेन। यस चेतावनीमूलक उदाहरणबाट हामी पाठ सिकौं। यहोवाप्रति वफादार रहेर अनि उहाँले तोक्नुभएको स्तर पालन गरेर छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको सधैं सही प्रयोग गरौं।—१ कोरि. १०:११.
१०. त्रुटिपूर्ण मानिसहरूले आफ्नो छनौट गर्ने स्वतन्त्रता परमेश्वरको आदर हुने तरिकामा प्रयोग गर्न सक्छन्‌ भनेर कस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछ? (शीर्षकमाथिको चित्र हेर्नुहोस्)
१० हिब्रू अध्याय ११ मा परमेश्वरका १६ जना सेवकको नाम दिइएको छ, जसले यहोवाले तोक्नुभएको सीमाभित्र रहेर आफ्नो छनौट गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गरे। त्यसो गरेकोले तिनीहरूले प्रचुर मात्रामा आशिष्‌ र भविष्यको लागि पक्का आशा पाए। उदाहरणको लागि, परमेश्वरले नूह-लाई तिनको परिवार र तिनको भावी पुस्तालाई जोगाउन एउटा जहाज बनाउने निर्देशन दिनुभयो। नूहसित बलियो विश्वास भएकोले तिनले उहाँका निर्देशनहरू पालन गर्ने छनौट गरे। (हिब्रू ११:७) अब्राहाम र सारा-ले प्रतिज्ञा गरिएको भूमिसम्म जान परमेश्वरले दिनुभएको निर्देशन खुसीसित स्विकारे। यो लामो यात्रा थालिसकेको भए तापनि तिनीहरूसित संवृद्ध सहर ऊर “फर्कने मौका” थियो। तर ‘परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका कुराहरू’ भविष्यमा पूरा हुनेछन्‌ भनेर तिनीहरूसित पक्का विश्वास थियो; तिनीहरू ‘अझ उत्तम ठाउँ हासिल गर्न अघि बढिरहेका थिए।’ (हिब्रू ११:८, १३, १५, १६) मोशा-ले मिश्रको धनसम्पत्तिको लोभ गरेनन्‌, बरु “पापको क्षणिक सुखभोग गर्नभन्दा परमेश्वरका जनहरूसित दुर्व्यवहार भोग्न रोजे।” (हिब्रू ११:२४-२६) छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको कदर गरेर अनि यसलाई परमेश्वरको इच्छाबमोजिम गर्न प्रयोग गरेर ती पहिले-पहिलेका सेवकहरूको विश्वास अनुकरण गरौं!
११. (क) छनौट गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा पाइने एउटा ठूलो आशिष्‌ के हो? (ख) छनौट गर्ने स्वतन्त्रतालाई सही तरिकामा प्रयोग गर्न तपाईंलाई केले उत्प्रेरित गर्छ?
११ हाम्रो लागि अरूले निर्णय गरिदियो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यसो गर्नु भनेको छनौट गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा पाइने एउटा ठूलो आशिष्‌बाट आफूलाई वञ्चित गर्नु हो। त्यस आशिष्‌बारे व्यवस्था ३०:१९, २० मा बताइएको छ। (पढ्‌नुहोस्) पद १९ मा परमेश्वरले इस्राएलीहरूसामु राख्नुभएको छनौटबारे बताइएको छ। पद २० हेऱ्यौं भने तिनीहरूको मनमा के छ, त्यो प्रकट गर्न यहोवाले तिनीहरूलाई एउटा अनमोल मौका दिनुभयो। हामी पनि यहोवाको उपासना गर्ने छनौट गर्न सक्छौं। आफ्नो स्वतन्त्रता परमेश्वरप्रतिको प्रेम प्रकट गर्न र उहाँको आदर अनि महिमा गर्न प्रयोग गर्नुभन्दा राम्रो तरिका अरू के होला र!
छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नगर्नुहोस्
१२. छनौट गर्ने स्वतन्त्रतालाई हामीले कहिल्यै पनि के गर्नु हुँदैन?
१२ मानौं, तपाईंले साथीलाई एउटा बहुमूल्य उपहार दिनुभयो। उसले त्यो उपहार फोहोरको डुङ्‌गुरमा फ्याँक्यो भनेर थाह पाउनुभयो भने तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? अथवा उसले त्यो उपहार अरूलाई हानि पुऱ्याउन प्रयोग गऱ्यो भनेर थाह पाउनुभयो भने तपाईंलाई झन्‌ कति दुःख लाग्ला! अब विचार गर्नुहोस् त, यतिका धेरै मानिसले आफ्नो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेर अरूलाई हानि पुऱ्याउने निर्णयहरू गरेको देख्दा यहोवालाई कस्तो लाग्छ होला? “अन्तको दिनमा” मानिसहरू “कृतघ्न” हुनेछन्‌ भनेर बाइबलमा भविष्यवाणी गरिएको छ। (२ तिमो. ३:१, २) यहोवाले दिनुभएको यस बहुमूल्य वरदानको कहिल्यै दुरुपयोग नगरौं बरु यसको मोल गरौं। तर हामी कसरी त्यसो गर्न सक्छौं?
१३. छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नगर्ने एउटा तरिका के हो?
१३ कसलाई साथी बनाउने, कस्तो पहिरन र कोरीबाटी गर्ने अनि कस्तो मनोरञ्जन छान्ने भनेर हामी प्रत्येकले छनौट गर्न सक्छौं। तर शारीरिक इच्छाहरूको दास हुने वा संसारको लाजमर्दो फेसन र चलनको पछि लाग्ने छनौट गऱ्यौं भने हाम्रो स्वतन्त्रतालाई “खराब काम गर्ने आड” बनाइरहेका हुन्छौं। (१ पत्रुस २:१६ पढ्‌नुहोस्) छनौट गर्ने स्वतन्त्रता “शरीरका इच्छाहरू पूरा गर्न” चलाउनुको साटो हामी “सबै थोक परमेश्वरकै महिमाको निम्ति” गर्न कटिबद्ध हुन चाहन्छौं।—गला. ५:१३; १ कोरि. १०:३१.
१४. यहोवामा भरोसा राख्ने र आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नेबीच कस्तो सम्बन्ध छ?
१४ छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नगर्ने अर्को तरिका हो, यहोवामा आफ्नो भरोसा राख्नु र हाम्रो सुरक्षाको लागि उहाँले तोक्नुभएको सीमाभित्र रहेर निर्णय गर्नु। उहाँले ‘हाम्रो फाइदाको निम्ति सिकाउनुहुन्छ, हामी जाने बाटोमा हामीलाई डोऱ्याउनुहुन्छ।’ (यशै. ४८:१७) परमेश्वरको वचन यसो भन्छ: “मानिसहरूको मार्ग त्यो आफैमा छैन। आफ्नो पाइलालाई ठीक मार्गमा हिंडाउने शक्ति मानिसमा छैन।” (यर्मि. १०:२३) यस सत्यलाई हामीले नम्र भई स्विकार्नुपर्छ। आदम र विद्रोही इस्राएलीहरूजस्तो आफैमा भर नपरौं बरु ‘आफ्नो सारा भरोसा परमेश्वरमा राखौं।’—हितो. ३:५.
अरूको छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको आदर गर्नुहोस्
१५. गलाती ६:५ मा दिइएको सिद्धान्तबाट हामी के सिक्छौं?
१५ हामीले अरूको छनौट गर्ने अधिकारको आदर गर्नुपर्छ। किन? हामी सबैसित आफ्नो निर्णय आफै गर्ने अधिकार छ। त्यसैले दुई जना ख्रीष्टियनले कुनै एउटा विषयमा निर्णय गर्नुपऱ्यो भने तिनीहरूको निर्णय एउटै हुन्छ भन्ने छैन। यही कुरा हाम्रो आचरण र उपासनाको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। गलाती ६:५ मा दिइएको सिद्धान्त नबिर्सनुहोस्। (पढ्‌नुहोस्) हरेक ख्रीष्टियनले ‘आफ्नो भारी आफै बोक्नुपर्छ’ भनेर बुझ्यौं भने अरूको छनौट गर्ने अधिकारको आदर गर्न सक्नेछौं।
हामीले जस्तो निर्णय गऱ्यौं, अरूलाई पनि त्यस्तै निर्णय गर्न दबाब नदेऔं (अनुच्छेद १५ हेर्नुहोस्)
१६, १७. (क) कोरिन्थको मण्डलीमा छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको प्रयोग कसरी विवादको विषय बन्यो? (ख) पावलले यो विवाद कसरी सुल्झाए? यस घटनाबाट निर्णय गर्ने अरूको अधिकारबारे हामी के सिक्न सक्छौं?
१६ अन्तस्करणको सन्दर्भमा हाम्रा भाइबहिनीहरूको छनौट गर्ने स्वतन्त्रतालाई हामीले किन आदर गर्नुपर्छ, त्यसबारे बुझ्न बाइबलको एउटा उदाहरण विचार गरौं। कोरिन्थका ख्रीष्टियनहरूको एउटा विषयमा फरक-फरक धारणा थियो। त्यो विषय थियो, मूर्तिलाई चढाइएको हुन सक्ने मासु पछि बजारमा बेच्यो भने त्यो मासु खान हुन्छ कि हुँदैन? कसैले यस्तो तर्क गरे: ‘मूर्ति भनेको केही पनि होइन, त्यस्तो मासु खाए हुन्छ।’ अरू कतिपय जो पहिला मूर्तिपूजा गर्थे, तिनीहरूको लागि त्यस्तो मासु खानु भनेको मूर्तिपूजा गर्नुसरह थियो। (१ कोरि. ८:४, ७) यो संवेदनशील विषय थियो; यसले गर्दा मण्डलीमा विभाजन हुन सक्थ्यो। यस विषयमा परमेश्वरको जस्तै दृष्टिकोण राख्न पावलले कोरिन्थका ख्रीष्टियनहरूलाई कसरी मदत गरे?
१७ सर्वप्रथम, खानेकुराले हामीलाई परमेश्वरसित घनिष्ठ बनाउँदैन भनेर पावलले ती दुवै पक्षलाई सम्झाए। (१ कोरि. ८:८) त्यसपछि तिनले तिनीहरूलाई छनौट गर्ने आफ्नो “अधिकार कमजोरहरूका लागि कुनै किसिमले ठक्करको कारण नबनोस्” भनेर चेतावनी दिए। (१ कोरि. ८:९) अन्तमा, त्यस्तो मासु खान छनौट गर्नेहरूलाई दोषी ठहऱ्याउन नखोज्नू भनी तिनले कमजोर अन्तस्करण भएका व्यक्तिहरूलाई सल्लाह दिए। (१ कोरि. १०:२५, २९, ३०) त्यसैले उपासनासित सम्बन्धित यस महत्त्वपूर्ण विषयमा हरेक ख्रीष्टियनले आफ्नो अन्तस्करण चलाएर निर्णय गर्नुपर्थ्यो। त्यसोभए योभन्दा कम महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हाम्रा भाइबहिनीले गरेका निर्णयहरूलाई के हामीले आदर गर्नुपर्दैन र?—१ कोरि. १०:३२, ३३.
१८. छनौट गर्ने स्वतन्त्रतालाई कदर गरेको कुरा तपाईं कसरी देखाउनुहुन्छ?
१८ यहोवाले हामीलाई छनौट गर्ने स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। यसले गर्दा हामीले साँचो स्वतन्त्रता पाएका छौं। (२ कोरि. ३:१७) परमेश्वरले दिनुभएको यो वरदानलाई हामी कदर गरौं किनभने यहोवालाई हामी कत्तिको प्रेम गर्छौं भनी देखाउन यही स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर निर्णय गर्न सक्छौं। यस अनमोल वरदानलाई परमेश्वरको आदर हुने तरिकामा चलाऔं अनि अरूले गरेको निर्णयलाई आदर गरौं। यसरी यस अनमोल वरदानको कदर गरिरहौं!